तीन अस्पताल पुग्दा पनि लिइएन भर्ना, अन्त्यमा आफ्नै गाउँको आइशोलेशनमा गयो ज्यान – नेपाली सूर्य
तीन अस्पताल पुग्दा पनि लिइएन भर्ना, अन्त्यमा आफ्नै गाउँको आइशोलेशनमा गयो ज्यान
October 24, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on तीन अस्पताल पुग्दा पनि लिइएन भर्ना, अन्त्यमा आफ्नै गाउँको आइशोलेशनमा गयो ज्यान
काठमाडौं, ८ कात्तिक । सुनसरीमा उपचार अभावका एक कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अन्तिम अवस्थामा पुग्दापनि अस्पतालहरुले भर्ना नलिएपछि बराहक्षेत्र नगरपालिका ७ बाङ्गे भन्ने स्थानका ३६ बर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
उनको अवस्था गम्भीर भएपछि विभिन्न अस्पताल पुर्याइएपनि भर्ना लिन नमानेपछि फर्काएर चतराको आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याइएकामा उनको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो । नोबेल मेडिकल कलेजमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनको कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । त्यसअघि कोसी अस्पताल विराटनगरले पनि भर्ना लिन नमानेको बताइएको छ ।
स्वसप्रश्वासमा समस्या आइरहेका बेला कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि नोबेल अस्पतालले पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर नभएको भन्दै भर्ना लिन नमानेपनिछ बिरामीलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरान ल्याइएको थियो । तर धरानमा पनि अक्सिजन र भेण्टिलेटर अभाव भएका कारण भर्ना लिइएको थिएन ।
त्यसपछि अन्त्यमा उपाय नलागेपछि आफ्नै गाउँ फर्किइएका ती पुरुषको चतरास्थित आइसोलेसनमा बिहान १० ३० बजेतिर मृत्यु भएको बताइएको छ । उनमा २ दिनअघिबाट स्वासप्रश्वासमा उच्च समस्था थियो । news24nepal
मलेशियामा कोभिडका कारण एकैदिन सवैभन्दा धेरैको मृत्यु, शुक्रवार नेपालबाट आएका एक व्यक्तिमा संक्रमण
तानसेन वडा नं. ४ का अध्यक्ष राजेन्द्रमुनी शाक्यकाे निधन
ओलीलाई सर्वोच्चबाट एकपछि अर्को धक्का, अबको रणनीति कस्तो ?
June 23, 2021 June 23, 2021 Nepali Surya
अधिकृतबाट राजीनामा दिएर प्रहरीका कुकुर स्याहार्न थालिन् देउती गुरुङ
November 15, 2020 Nepali Surya